Otu esi agba ndị debanyere aha YouTube gị ume ịnọdụ ala na vidiyo ogologo - SoNuker
YouTube bụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ege ntị ka ha lelee ọdịnaya dị iche iche na YouTube, ma egwuregwu, nkuzi, ma ọ bụ ihe ọzọ. Achọpụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 27% nke ndị na-ekiri ihe na-ekiri ihe karịrị awa 10 nke ọdịnaya vidiyo kwa izu. Ọzọkwa, a na-ewerekarị oge elekere na YouTube karịa nke Facebook na Netflix jikọtara ọnụ.
Oge nche bụ ihe dị mkpa maka YouTube, ọ na-ekpebikwa vidiyo ndị nwere ike ịpụta karịa na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ dị mkpa icheta na YouTube na-elekwasị anya na vidiyo ndị ahụ na-abawanye oge onye ọrụ na-etinye na YouTube. A na-ewere vidiyo ndị toro ogologo dị ka ihe kacha mma n'akụkụ a. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya na-achọpụta na ndị mmadụ anaghị ekiri vidiyo ha niile ka ha nọrọla ọtụtụ awa na ụbọchị mepụta ọdịnaya kachasị mma. Gịnị ka ha nwere ike ime n’ọnọdụ dị otú ahụ? Site na ndụmọdụ ndị a, ndị na-emepụta ọdịnaya ga-enwe ike ime ka ndị na-ekiri ha nwee vidiyo YouTube ogologo ha wee mụbaa ntọala ndị debanyere aha ha.
1. Malite na okwu mmeghe nke dọọrọ mmasị ndị na-ege ntị
Okwu mmeghe nke vidiyo kwesịrị ijikọ ndị na-ege ntị site na mmalite. Ọ dị mkpa ijide uche nke ndị na-ekiri ya na nke mbụ 15 sekọnd. Enwere ike ime nke a n'ụzọ dị iche iche -
Jiri ihe a na-ahụ anya ma ọ bụ àgwà gị mee ka akụkụ nke mbụ nke vidiyo na-adọrọ mmasị ndị na-ege ntị.
Gbalịa ịgwa ndị na-ekiri ya okwu ozugbo kama ịgwa ọtụtụ ndị na-ege ntị okwu.
kpalite ọchịchọ ịmata ihe nke ndị na-ekiri ya site n'ịjụ ha ajụjụ.
Nye ndị na-ekiri ihe nlele nke ihe ha ga-atụ anya ya na obere mkpirisi ụdị.
Mgbe ị na-ebu ụzọ jiri akụkụ ndị na-adọrọ mmasị nke vidiyo ahụ, ndị na-ekiri na-enwe ike ịrapara na gburugburu ruo njedebe nke edemede vidiyo.
2. Ejila clickbait na aha ma ọ bụ thumbnail
Mgbe ndị na-ekiri pịa vidiyo gị mgbe ha hụchara thumbnail ma ọ bụ aha, ọ dị mkpa na ị ga-emezu nkwa ahụ. Mmalite nke vidiyo kwesịrị ịgụnye akụkụ ụfọdụ gbasara ihe ha na-atụ anya ịhụ. Ọ bụrụ na thumbnail ma ọ bụ aha ahụ na-eduhie eduhie, ndị na-ekiri ya adịchaghị elele vidiyo ahụ ruo ọgwụgwụ. Gbalịa ịzụlite nghọta nke ihe ndị na-ekiri nwere ike ịmasị gị ka ị ghara ịmalite iji ọnyà pịa na mbụ.
3. Debe CTA n'ụzọ dabara adaba
Na ngalaba nyocha, ị ga-enwe ike ịhụ oge mgbe ọtụtụ ndị ọrụ gị kwụsịrị. Nke a bụ ebe dị mma iji tinye ihe nwere ike itinye uche ndị na-ekiri ya ka ha na-aga n'ihu na-ekiri vidio ahụ ruo ọgwụgwụ. Tupu nkwụsị nke nkezi, ị nwere ike ịgụnye CTA ma ọ bụ kwupụta onyinye.
4. Jiri isiakwụkwọ mebie vidiyo
YouTube nwere atụmatụ nke na-ekewa vidiyo n'ime isiakwụkwọ. Site n'enyemaka nke atụmatụ a, ị ga-eme ka ogologo vidiyo YouTube gị dị mfe iji rie maka ndị na-ekiri ya. Ndị na-ekiri ga-enwe ohere ka mma ịghọta ihe ha nwere ike ịtụ anya na-esote na vidiyo. Zụlite atụmatụ maka otu ị ga-esi kewaa vidiyo n'ime akụkụ. Isiakwụkwọ ọ bụla dị na vidiyo YouTube kwesịrị inwe mmeghe na-akpali akpali nke na-esote akụkọ na-atọ ụtọ. Ịmepụta ndepụta ga-aba uru na usoro a.
5. Gụnye nkwụsị ụkpụrụ na vidiyo ogologo gị
Ịbawanye ndị debanyere aha YouTube gị, na ime ka ha rapara ogologo oge dabere na otu ihe dị mkpa - ntinye aka. Enwere ike ime nke a site na iji usoro nkwụsị nke ụkpụrụ. Ndị na-ekiri gị na-enwekarị ike ọgwụgwụ mgbe akụkọ na onyonyo ndị yiri ya na-emegharị onwe ha na vidiyo dị ogologo. Ị nwere ike iji nkwụsịtụ ụkpụrụ site n'ịgbanwe akụkụ igwefoto, eserese na ihuenyo na B-roll.
Site na ndụmọdụ na usoro ndị a, ị ga-enwe ike ime ka ndị na-ekiri gị na-etinye aka na edemede vidiyo gị ogologo oge. Site n'ịhụ na ndị na-ekiri gị na-ekiri vidiyo ahụ ruo na njedebe, ọ bụghị naanị na ị ga-abawanye Oge YouTube mana na-agbanyekwa na ndị debanyere aha YouTube ọhụrụ. SoNuker.com nwere ike ime ka usoro a dịrị gị mfe. Anyị na-enye ọrụ YouTube dị iche iche iji bulie oge nlele, nlele, oke na zụta ndị debanyere aha YouTube maka ọwa gị. Kpọtụrụ anyị taa ka ịmatakwu maka ọrụ YouTube adịchaghị mkpa.
Otu esi agba ndị debanyere aha YouTube gị ume ịnọdụ ala na vidiyo ogologo nke ndi dere SoNuker, 26 November 2021
Ndụmọdụ iji dee edemede edemede maka vidiyo YouTube gị
Mana ahia YouTube abughi nani imeghe uzo YouTube na ibugo ihe obula na ihe obula. N'ihi na ika gị jidere eyeballs wee bụrụ onye guzosiri ike player na ahịa, i kwesịrị ilekwasị anya on
Kedu ụdị Kachasị Ekele na vidiyo YouTube?
You ma na a na-ele ihe ruru ijeri vidiyo ise na YouTube kwa ụbọchị? Na dijitalụ afọ anyị bi taa, online video gụgharia aghọwo ihe ọzọ ma ọ bụ na-erughị otu na YouTube, nke bụ…